အန်းဒရွိုက်သတင်း & မိုးလေဝသ Apps ကပ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း & မိုးလေဝသ Apps ကပ
Category: - သတင်း & မိုးလေဝသ Apps ကပ
ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်မှာတော့သူကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ရာသီဥတုမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူယနေ့အထိတက်နေဖို့မလိုချင်ပါသလဲ? တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာအတွက်လက်ရှိဖြစ်ရပ်များအချိန်နှင့်သတင်းနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်အသေးစိတ်နှင့် updated သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသင်တို့ရှေ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ရာသီဥတုနှင့်တီဗီနှင့်တူသတင်းများ, သတင်းစာနှင့်ရေဒီယိုနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များရရှိရန်နည်းလမ်းများများများရှိပါတယ်။ သို့သော်နည်းပညာ၏တိုးဖို့သွားလာရင်းကျေးဇူးတင်စကားအပေါ်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များရရှိရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဤ သတင်းနှင့်ရာသီဥတုအက်ပ်များ ရေပန်းစားပုံပြင်များ, ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်ရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများအပါအဝင်သုံးစွဲသူအားလုံးအရေးကြီးအသေးစိတ်ပေး။ သင်တို့သည်လည်းလက်ရှိလုပ်ငန်းရေးရာ, အားကစား, နည်းပညာ, နိုင်ငံရေးနှင့်အခြားဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုအသိပညာရရှိနိုငျသညျ။
ဤရွေ့ကား apps များမှာလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ပုံပြင်များနှင့် app ကိုကိုယ်နှိုက်မှတကိုထိပုတ်ပါ access ကိုပေးပင်မမျက်နှာပြင် Widgets တွေအတူပါလာ။ သင်အလွယ်တကူနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အပေါ်လမ်းကြောင်းထိန်းထားနိုင်တယ်။ သငျသညျကိုလညျးပုံပြင်များအပေါ်မှတ်ချက် post နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ သတင်းနှင့်ရာသီဥတုအက်ပ်များ ထို့အပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများအားလုံးကိုအသေးစိတ်ပေး။ သူတို့ကမည်သည့် device ကိုတည်နေရာကို up-to-date ဖြစ်အောင်ရာသီဥတုရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်အလွယ်တကူတိကျတဲ့ရာအရပျအပျေါ updates များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား apps များကမ္ဘာကြီးကိုအကြောင်းကိုအားလုံးနောက်ဆုံး update နှင့်သတင်းနှင့်အတူတက်လာ။ သင်အမှန်တကယ်ပြတင်းပေါက်အားလုံးအချိန်ကို refresh မှမရှိကြပါဘူး။ ဤသူအပေါင်းတို့သည် apps များအခြိနျမှနျမှအလိုအလျှောက် update လုပ်နေကြသည်။ သငျသညျလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အားကစား, စီးပွားရေး, ကျန်းမာရေး, နည်းပညာ, သင်စိတ်ဝင်စားအံ့သောငှါကအခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ရပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းဤအ apps များနှင့်အတူအပ်ဒိတ်များအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်လွှမ်းခြုံနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များမှတစ်ဆင့် browse နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား apps များပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အသေးစိတ်ကိုနှင့်လက်ရှိ updates များကိုပေးနိုင်ပါသည်။
eMap HDF - ရာသီဥတု ...
မိုးလေဝသရေဒါ - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ ...
ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် 2020 –...
ရာသီဥတုအခြေအနေ - ရာသီဥတု ...
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် - Live ...
Overdrop မိုးလေဝသ -...
မိုးလေဝသ Radar အခမဲ့
မိုးလေဝသ Wiz: တိကျမှန်ကန်သောမိုးလေဝသ ...
RainViewer: မိုးလေဝသရေဒါ ...
မိုးလေဝသ app ကို
ရိုးရှင်းသောရာသီဥတု & နာရီ ...
123 ...6နောက်တစ်ခု